लकडाउनयता ६० गीत रेकर्ड गराउने व्यस्त गायिका! :: Setopati
लकडाउनयता ६० गीत रेकर्ड गराउने व्यस्त गायिका! 'स्वर भासिँदा पनि गाउनु परेको छ'
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, कात्तिक ८
रचना रिमाल। तस्बिर सौजन्यः रचनाको फेसबुक
दैवले पर्दा उठायो आमा, आउँदिनँ फर्केर...
काठमाडौंको व्यस्त दैनिकीकै बीच दसैं आयो। यही बहानामा उनी तीन दिनअघि आफ्नो घर चन्द्रगढी, झापा पुगेकी छन्।
'काठमाडौंको दैनिकीमा आफ्नो लागि समय दिन गाह्रो भइरहेको थियो। धन्न दसैं आयो र आफ्ना लागि थोरै समय पाएकी छु। कहिलेकाहीँ त शरीरलाई आराम दिनुपर्ने बेलामा पनि गीत गाउनु पर्थ्यो,' उनले टेलिफोन कुराकानीमा भनिन्।
संगीतकार नारायण रायमाझीसँगै गाएको 'नमुछे आमा दहीमा टीका' को रेकर्डिङ गर्ने बेला पनि उनलाई ज्वरो आएको थियो। उनी दुई पटक रेकर्डिङका लागि गएर पनि गाउन नसकी फर्किएकी थिइन्।
उनले भनिन्, 'यो गीत गाउँदा पनि मेरो स्वर भासिएको छ।'
यस्तो पहिलो पटक भने भएको हैन। यसअघि पनि स्वर बसेका बेला उनले धेरै गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्। यसको मुख्य कारण उनको व्यस्तता नै हो। भनिन्, 'एउटा गीत समयमा गाउन नसके अर्को गीतको समय हेरफेर गर्नुपर्ने हुनाले गाह्रो हुँदा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।'
तोकेको समयमा गीत गाउन नसक्दा कयौं पटक उनीसँग संगीतकारहरू रिसाएका पनि रहेछन्। उनले भनिन्, 'बिरामी भइन्छ भनेर पहिल्यै त थाहा हुँदैन नि हैन?'
'ज्वरो आयो, रुघा लाग्यो भन्न पनि नपाइने। कहिलेकाहीँ त आराम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो,' उनले भनिन्, 'त्यस्तो बेला आमा, दिदीसँग फोनमा बाेलेर मन बहलाउँथेँ।'
उनले हाँस्दै भनिन्, 'पिङ खेल्न नपाए पनि ढिलोसम्म सुतेर मजा लिइरहेको छु।'
'थकाइ यति लागेको रहेछ कि शीतभन्दा निद्रा प्यारो भइरहेछ,' एकछिनसम्म फोनमा उनको हाँसोको खित्का छुटिरह्यो।
उनले भनिन्, 'आज र भोलि बजार गएर सबैलाई केही किनेर दिन बिताउने छु।'
आफ्नो लागि भने उनले काठमाडौंमै टन्नै लुगाहरू किनेको बताइन्। आमाले 'पैसा जोगाऊ, फुर्मास नगर' भने पनि उनलाई घरका हरेक सदस्यलाई केही किन्दिने मन छ।
'आफ्नो कमाइ परिवारका लागि खर्च गर्न पाउँदा आनन्छ आउँछ,' उनले थपिन्, 'पैसा खर्च भएपछि भने ला सबै सकियो जस्तो पनि हुने रहेछ।'
लकडाउन भरी घर खर्च पठाएकी रचना सामान्य परिवारकी सदस्य हुन्। उनकी आमा एक वर्षअघिसम्म घरछेउमै चटपटे बेच्थिन्। पसलमा सबैले पालो दिने क्रममा रचना पनि बस्थिन्। त्यहाँ बस्दा गीत गुनगुनाइ राख्ने उनलाई एउटा युट्युब भिडिओमा 'चटपटे बेच्ने गायिका' का रूपमा प्रस्तुत गरियो।
उनकै स्वरको पहिलो चर्चित गीत भने 'फोटो फिरिममा' हो। शिशिर भण्डारीको शब्द-संगीतमा यो गीत गाएपछि आफूलाई धेरैले गीत गाउने प्रस्ताव राखेको उनी बताउँछिन्।
रचनाको आवाजमा नारायण रायमाझीले यसअघि पहिल्यै चर्चा पाएको 'उनको प्रीति पहिले हो कि' गीत रि-रेकर्ड गराएका थिए। रचनाले स्वर दिएका यी गीत लाखौंले रूचाइसकेका छन्।
पछिल्लो समय रचनाले स्वर दिएका धेरै गीत स्रोताको रोजाइमा परेका छन्। 'फोटो फिरेममा', 'मिनरल वाटर', 'पहिलो पल्ट भेट हुँदा' आदि उनका केही मनपराइएका गीत हुन्। यो वर्ष तीजमा उनले पनि स्वर दिएको 'आयौं चेली' निकै चलेको थियो।
रचनाका अनुसार गाउने सहमति भइसकेका दर्जनभन्दा बढी गीत छन्। भनिन्, 'तर यतिबेला भने म गीतभन्दा गाउँमा हराउन चाहन्छु। परिवारसँग समय बिताउन चाहन्छु।'
'मनमा लागेको कुरा भनिहाल्छु, छेउका मान्छे गलल्ल हाँसेपछि पो धत् भनेजस्तो हुन्छ,' उनले भनिन्।
यस्तै घटना सुनाइन् पनिः
भनिछन्, 'आब्बुई, ऊ हेर्नु त हिरो दयाहाङ राई!'
'म त हँसाइदिन्छु। हँसाइदिन्छु भन्दा पनि मेरो कुराले अरू हाँस्नु हुने रहेछ,' उनले सोधिन्, 'तपाईंलाई पनि रमाइलो भाको होला हैन त मसँग कुरा गर्दा!'
व्यस्तता त त्यस्तै नै हो। हाँस्दै भनिन्, 'घर आएपछि पनि अन्तर्वार्ता दिन भ्याइनभ्याइ छ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ८, २०७७, ०३:४०:००
गायक प्रकाश सपुतले निषेधाज्ञाबीचमै ल्याए-‘प्रार्थना’